Fanokafana ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny faha-200 taona ny Sekoly Protestanta. | Fitandremana Ankadifotsy
Fanokafana ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny faha-200 taona ny Sekoly Protestanta.
NOSOKAFANA NY 26, 27, 28 MARTSA 2019 NY JOBILY FAHA 200 TAONA SEKOLY PROTESTANTA FJKM
Ny talata 26 martsa 2018 lasa teo no nosokafana ny Jobily faha 200 taona ny Sekoly Protestanta FJKM tany amin’ny Kianja Kaominaly Tsiroanomandidy. Filaharana namakivaky ny tanana no nialoha ny fanompoam-pivavahana. Nitarika ny fotoana ny mpitandrina RAJAONERA sady Prezida Synodaly any an-toerana. Ny filohan’ny FJKM, ny mpitandrina Irako Andriamahazosoa Ammi, no nitondra ny hafatr’ Andriamanitra. Ny Jakoba 5: 7a no nitondrana ny hafatra: “Mahareta tsara mandrapiavin’ ny Tompo “ izany ihany koa no teny fanevan’ny fankalazana. Nozarainy roa ny toriteny: - mandrapiavin’ny Tompo, misy zava-dehibe 3 mila atao mazava:
manana ny Tompo isika
Jesoa Kristy no Tompo
ary tena ho avy ny Tompo.
Ny faharoa kosa dia mahareta tsara mandrapiavin’ny Tompo koa:
ary miareta tsara.
Nantitranteriny tamin’izany koa fa tokony hamafisina ny fitsipi-pifehezana ao anatin’ny Sekoly manerana ny sekoly FJKM.
Nisy ny fanokafana ny varotra fampirantina tao amin’ny sekoly Sewell. Nitohy tamin’ny fanamarihina ny andron’ny sekoly FJKM avy hatrany ny fotoana izay nisy ireo fifaninanana sy lalao ara-panatanjahan-tena, lalao ara-kolotoraly, vakodrazana, fifaninanana soratra masina, hira sy dihy, cover, nataon’ireo mpianatra tamin’ izany.
Nifarana ny Alakamisy 26 martsa 2019 kosa ny andron’ny sekoly. Natao tao amin’ny FJKM ZionaTsiroanomandidy SP. 34 ny fanompoam-pivavahana izay. notarihin’ Andriamatoa Ravelonanosy Mamy Tiana Aumonier sekoly Fjkm, ary ny nitondra ny tenin’Andriamanitra dia ny Sekretera jeneralin’ny FJKM Radimison Jonah, mpitandrina nalaina tao amin’ny Matio 8: 18-22. Notanterahina tao an-tokontanin’ny sekoly Sewell kosa ny asa vavolombelona izay fanolorana mari-boninahitra sy medaly ho an’ ny mpampianatra, Tale, mpandraharaha eo anivon’ny sekoly FJKM. Taorian’ny izany no nanolorana fankasitrahana ho an’ ireo laharana voalohany sy faharoa ary fahatelo tamin’ny fifaninanana rehetra.
Raha tsiahivina dia notontosaina teny amin’ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana ny Alahady 08 Desambra 2018 ny fanompoam-pivavahana fanolorana sy fandraisan-tanana ireo komity ny Jobily faha 200 taona ny Sekoly.Araka izany dia miantso ny fiangonana hifanohana sy hifanome tananana amin’izao taon-jobily izao. Ny tsangambato lehibe amin’ity taon-jobily ity dia ny fanatsarana, fanorenana. Ny Ivon’ny Fankalazana dia hatao ny 8 septambra 2019 any Fianarantsoa. Ny famaranana ny volana novambra 2019.
Nanangona Fifi AV
fintim-baovaon´ny sampana, sampan´asa, asa ary fikambananana
SAMPANA DORKASY IVON´NY FAHA-120 TAONA
Famaranana ny Jobily faha-50 taonan'ny FJKM sady faha-200 taona nidiran´ny LMS teto Madagasikara
Akon'ny fetin'ny Ray 2018